Taksiga mustaqbalka waa qeyb kamid ah hada (II): Lyft | Wararka IPhone
Taksiga mustaqbalka waa qeyb kamid ah hada (II): Lyft
Qaarkood waxay yiraahdaan hadaadan cadawga ka adkaan karin waa inaad ka mid noqotaa. Lyft waxay heshay dhowr fursadood oo ay kubiiri karto Uber oo ay dagaalka galin karto labada titan ee tagaasida 2.0, laakiin had iyo jeer waxay ku dhammaatay diidmada suurtagalnimadaas iyada oo laga soo bilaabo qafiskeeda waxay sii waday inay ku sharraxdo ololeyaal suuqgeyn aad u qallafsan, kicinta kobaca meelwalba iyo runtii adeeg wanaagsan.
1 Ku tartam qiimo kasta
2 Dhibaatooyin la'aan
Ku tartam qiimo kasta
Haddii ay jiraan wax ku sifoobay Lyft, waa tartanka ba'an ee ay ka sameysay Uber. Tani waxay keentay khasaaro malaayiin dollar ah oo ku kacay qiimaha dallacsiin weyn iyo dhiirigelin badan oo loogu talagalay darawallada, wax aan umuuqda mid aan wax badan ku aheyn maalgashadayaasha iyadoo la tixgelinayo xaqiiqda ah in shirkadda midabada leh ay ku guuleysatay inay sii wado sii kordheysa tirada isticmaaleyaasha bil kasta isla markaana ay isku xoojiso sida ikhtiyaarka labaad ee Mareykanka.
Taasina waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee ay tahay inaan ku xisaabtano Lyft: xilligan Waxay ka shaqeysaa oo keliya waddanka Waqooyiga Ameerika. Qorshayaasha ballaarinta ee codsigan uma aysan han weyneyn sida kuwa Uber, in kasta oo ay xaqiiq tahay in agaasimaheeda guud uu marar badan ka hadlay ballaarinta Yurub, xaqiiqadu waxay tahay in muddada gaaban aysan umuuqan inaan arki doonno.
Barnaamijka Lyft waa mid aad u fududXaqiiqdii, waxay u badan tahay inay leedahay isdhexgalka ugu fudud ee dhammaan wixii aan ku arki doonno meerisyadan dib u eegista. Iyada oo midab casaan ah oo horey loo yaqaanay ay ugu badnayd isdhexgalka, waxaan helnaa khariidad iyo sanduuqyada qaarkood si aan u buuxino halka aan ka nimid iyo halka aan u socono, iyo sidoo kale suurtagalnimada in la kala doorto xulashooyinka caadiga ah ee safarka: Khadka (wadaagista baabuur iyo keydinta) ), Lyft (istaandarka), Lagu daray (oo leh 6 kursi) iyo Premier (gawaarida raaxada ee kuraasta maqaarka). Khadka ayaa si gaar ah xiiso u leh maadaama qiimaha go'an yahay oo xitaa haddii aanaan wadaagin gaari, waxaan had iyo jeer bixin doonnaa wax ka yar kan caadiga ah ee loo yaqaan 'Lyft'
Waxaas oo dhami waxay la jaanqaadeen wakhtiyo macquul ah oo laga soo qaado magaalooyinka Mareykanka oo aan awoodey inaan ku tijaabiyo, iyo sidoo kale khibrad adeegsade oo aad u wanaagsan. In la dhammeeyo shaqada iyo sidii aan horeyba uga faallaynay Lyft waxay bixisaa suuq-geyn aad u dagaal badan, wax aan uga faa'iideysan karno isticmaale ahaan.
Sida barnaamijyada kale, waad ka faa'iideysan kartaa hel safar bilaash ah diiwaangelinta adoo adeegsanaya xiriiriyehan (Qaddarku wuu ku kala duwan yahay hadba taarikhda, in kasta oo inta badan uu u dhexeeyo 25 illaa 50 doolar), ama haddii kale waxaad samayn kartaa a diiwaangelin aan lahayn sumcad xayeysiis ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Taksiga mustaqbalka waa qeyb kamid ah hada (II): Lyft
Android Wear 2.0 ayaa la yimid LG Watch Style iyo Watch Sport oo uu naqshadeeyay Google
Flipboard-ka waxaa lagu cusboonaysiiyaa gudaha iyo dibedda nooca 4.0